ကောင်းကင်ဖြူ: March 2012
လ တန်ခူး ပေမို့ 
အလှ ထူး လေ တဲ့
ပိတောက် ဖူး ငယ်
ရွှေရည် လူး ရင်ဖြင့်
တို့“ဗမာ” အတာကူး လေ ပေါ့
နွဲကြ စို့လေ … ။
အတာ ကူး ချိန်ဝယ်
ရိုရာဟန် မှု မပျက်
တို့“ဗမာ” စဉ်ဆက်
ထိန်းကာ ပျော် ဤ ရက်
ချမ်းကာ စို ရေစင် ဖြန်း လို့ 
လန်းကာ ပျို ဘဝင် ခိုက် လေပေါ့
နွဲကြ စို့ပျော် ………. ။
လ တန်ခူးပေမို့ 
အတာဦး ပေလို့ 
အခါ ထူးရင် ဖြင့်
စိတ် သဒ္ဒါ ရင်ဝယ် ပိုက်ကာ
တို့“ဘာသာ” စဉ်ဆက်
မြတ်မဟာ အလှူပွဲ မို့ 
နွဲကြ စို့ နော် …. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:02 PM 8 comments
နည်းနည်းလောက် ရှင်းခွင့်ပြုပါ .... ။
လွန်ခဲ့ တဲ့ ၆ လကျော်ကျော် လောက် က ချစ်သူ ကောင်းကင်ဖြူ က blog လင့် တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကိုယ်ပိုင် ကဗျာ ရေးဟန် ၊ စာရေး ဟန် နှင့် စကားလုံး လှလှ လေးတွေ ရေးဖွဲ့ တက်တဲ့ blog လေးဆို ပြီး
" မိုးငွေ့ " လို့အမည် ရတဲ့ blog လင့် ကို ချစ်သူ ပေး မှ ကျနော် မောင်ဘုန်း အစ်မ မိုးငွေ့အိမ်လေးကို ရောက်ဖူးတာပါ ။ နောက်တော့ ကျနော် blog လေးကို မကြာခဏ ဆိုသလို ရောက်လာတက်တဲ့ အစ်မ မိုးငွေ့နဲ့blogger မိတ်ဆွေ ဖြစ်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ် ။
အမှန်တိုင်း ဝန်ခံရ ရင် ကျနော် အတွက် online အသုံးပြု ချိန် နည်းတဲ့အတွက် အစ်မ မိုးငွေ့အိမ်လေးကို အချိန် ရမှသာ ရောက်ဖြစ်ပင်မဲ့ ချစ်သူ ကတော့ အစ်မ မိုးငွေ့ ရဲ့ Post တွေ ကို မလွတ်တမ်း အားပေးတဲ့ ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့ကျနော် လိုင်းပေါ်စောစော ရောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ချစ်သူ က mail တစ်စောင် ပို့ ထားတာတွေ့ ရလို့ဖတ်ကြည့် တော့ ဒီနေ့အစ်မ မိုးငွေ့ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်လို့အချိန်ရ ရင် မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး ရေးပေးမို့တိုက်တွန်း ထားတွေ့ရတာနဲ့"အခါနွေဆန်း" လို့ အမည် ပေးပြီး ရေးလက် စ ကဗျာ လေး ကို အခြေခံပြီး
အစ်မ မိုးငွေ့အတွက် " မွေးနေ့သဝဏ်လွှာ " ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာ လေး ရေးမိခဲ့ တာပါ ။
ကဗျာ လေး ရဲ့ အောက်မှာ ကျေးစေရ ရတု လို့ကိုယ့်ဘာသာ တပ်လိုက်ရ တာကတော့ တောင်ငူ ခေတ်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ တဲ့ အရှင်သခင်အတွက် (သို့ ) အရှင်သခင် ကိုယ်စား ရေးဖွဲ့ရသော ရတုကဗျာ ရေးဟန် ကို ဆိုလို ခြင်း သာဖြစ်ပါတယ် ။ အင်းဝ ခေတ် မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ ကျေးစေ ၊ သာလိကာ စေ တုရကဗျာ ရေးဖွဲ့ဟန် ကို ဆိုလို ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ။
ကျေးစရ ရတု ဆိုသော် လည်း ပါဒ နှင့် ကာရံ လွဲ နေလျှင် ဖြစ်စေ ၊ ကျေးစေရ ရတု ရေးဖွဲ့ ဟန် နှင့် လွဲ နေပါက ကျနော် မောင်ဘုန်း တောင်းပန် ပါတယ် ။
ဒီကဗျာ လေးကို ချစ်သူ ကိုယ်စား ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ကျေးစေရ ရတု လို့အမည် တပ်လိုက် ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် .... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:57 AM5comments
ဦးခိုက် အသွင် … ။
ပူရောင် သန်းလို့ 
သွေ့ သွေ့ ဆင်လည်း
ဦးခိုက် အသွင် …. ။
မောင်ဘုန်း တော့ ခေါင်းစားအောင် လုပ်ပြန်ပြီလို့မထင်ပါနဲ့ ဗျာ ... ။ ဒီနေ့နေမကောင်းတာ နဲ့အလုပ်နား ပြီး တနေကုန် အိပ့်နေမိပါတယ် ။
နေ့ လည်က အိပ့်ရင်း အိပ်မက် မက်လို့အိမ့်မက်ထဲ ကမြင်ကွင်းကို ကဗျာ လေး ချရေးမိတာပါ ။
ဒီကဗျာ လေး ရဲ့ ခေါင်းစဉ် ကိုတော့ တွေးကြည့်ပေးနော် .... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:50 AM6comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:25 AM4comments
မင်္ဂလာ ပါဗျာ ။ မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့၏ ဒုတိယမြောက်အလှုအဖြစ် မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါသည်ဂေဟာကို ဧပြီလပထမပတ်တွင် လိုအပ်သည်များကို တတ်နိုင်သလောက် လှုဒါန်းရန် စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ... ။
ပါဝင် လှူဒါန်းလိုသူများ အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးတော်ဆောင် များ သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်း နိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ် ... ။
+81 80 3852 52
မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါဂေဟာအတွက် အလှူဒါန်း ရ ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အပြည့်စုံကို မြန်မာ မုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့၏ မှုရင်း ဆိုက်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ... ခဗျာ ...။
Posted by မောင်ဘုန်း at 5:33 AM 1 comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:32 AM 8 comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:23 AM7comments